Qodobada ugu muhiimsan ee misaaniyada dawladda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirada dhaqaalaha Iswiidhan Magdalena Andersson. sawir: Janerik Henriksson/TT
Qodobada ugu muhiimsan ee misaaniyada dawladda
La daabacay tisdag 20 september 2016 kl 13.55
Wasiiradda dhaqaalaha, Magdalena Andersson ayaa saaka shir saxaafadeed ku soo bandhigtay misaaniyadii dayrta aan ku jirno.
23,6 bilyan oo koroon. Waa inta lacag ay dawladdu ku maalgelinayso waddanka. Sidaas ayey wasiirada dhaqaalaha, Magdalena Andersson, shirkan ka sheegtay .6,4 bilyan ka mid ah kuwan ayaa la siinaya kaalmada dhaqaalaha. Tan ayaa ka dhigan in ay Iswiidhan kordhinayso lacagaha ay waddamada kale ku caawiso.
Sido kale ayaa 10 bilyan koroon oo dheeraad ah lugu maalgelinaya degmooyinka waddanka si ay u qaabilaan qaxootiga faraha badan ee waddanka yimid.
Dhanka kale ayaa 3,5 bilyan oo koroon lugu meeleeynaya qaabilada iyo isdhexgalka qaxootiga waddanka yimid.
1,8 bilyan oo koroon ayey dawladdu ky maalgelinaysa wasakheeynta deegaanka.
Ta kale ayaa ah in lacagaha loo kordhinayo qooysaska caruuraha faraha badan haysta. Laga bilaabo caruurta saddexaad ayaa lacag gaadhaysa 126 koroon bishi loo kordhinaya ,waxaa af- iswiidhiska lugu yidhaahdo flerbarnstillägg.
820 milyan ayaa lugu kordhinaya cashuur dhimista adeega guryaha ee loo yaqaano rutavdrag.
Magdalena Andersson, wasiiradda dhaqaalaha, ayaa sheegtay in ay dawladdu lacag gaadhaysa 180 bilyan siin doonto booliska waddanka, laga bilaabo sannadka dambe 2017. Hasayeeshe ayey u jeeda Andersson in lacagta ugu badan booliska soo gaadhi doonto laga bilaabo sannadka 2018 ilaa 2020. Dhanka kale ayuu booliska waddanka codsaday lacag intaas ka badan.
Hasayeeshe ayey dhici karta in dawladdu ka gaadhin in ay bisxiso lacagta ay booliska ugu ballan qaaday. Sababta ayaa ah in la hubin in ay dawladdu ku guuleeysan doonto doorashada sannadka 2018.
Dawladda ayaa ku talo jirta in ay lacag gaadhaysa 175 milyan oo koroon ku maalgeliso ka hor taga lacagaha waddamada dibadaha lugu qarsado si looga baxsado canshuuraha Iswiidhan.
Sido kale ayaa cashuuraha qaar la kordhin doona. Tusaalahan cashuuraha ku salaysan dakhliga soo gala dadka waddanka ka shaqeeya iyo kuwa dakhliga ugu sareeya qaata .Waxaa iyaduna la kordhinaya cashuuraha ku saabsan shidaalka iyo khamriga.
– Dawladdani waa mid masuuliyadeeda qaadaysa. Waxaa aad u muhiim ah in aanu dhaqaalaha waddanka la ilaaliyo, ayey sheegtay Magdalena Andersson.
450 milyan oo koroon. Waa inta lacag ay dawladdu ku maalgelinayso difaaca waddanka. Difaaca oo beeryahan la hadal hayay halku wargeeyska Svenska Dagbladet axadii ina soo dhaaftay kashiftay in militariga lugu meeleeyay jasiiradda Gotland todobaadkii hore xidhiidh la leeyahay in ay wasaarada gaashaandhiga Iswiidhan ka shakisanyihiin hurjuun ka iman kara Ruushka.
Dawladda ayaa filaysa in tirada qof ee shaqo l´aantu hayso gaadho boqolkii ba 6,8 sannadkan. Dabeetana hoos u degto sannadka dambe,.
Hasayeeshe ayey Magdalena Andersson sheegtay in aaney macquul ahin in ay Iswiidhan noqoto waddanka ugu shaqo l´aanta yar Yurub sanandka 2020. Tan ayaa ka dhigan in ay dawladdu dib uga noqotay saadalinti ay sameeyeen 2014:kii.
Sido kale ayey dawladdu filaysa in tirada qof ee shaqeeya kordhaan sannadkan, boqolkii ba 1,8, dabeetana sannadka dambe ay sii kordhaan.
Dhanka shaqo l´aanta ayey Magdalena Andersson sheegtay in ay dawladdu ku talo jirto in ay soo saarto istratajiyo ku saabsan si dadka wax soo bartay shaqooyin la dhigma cilmiga ay soo barteen loogu heli lahaa. Tusaalahan ayey qaxootiga waddanka yimid waxbarasho ku soo qaateen wadamadooda, ayey sheegtay Andersson.
Wexey sido kale macquul u noqonaysa dhalinyarada doonaysa in ay liisanka gaadhiga qaataan in lacag amaah ah ka codsadaan heeyada deeymaha iyo kaalmada waxbarashada ee CSN loo yaqaano.
Ugu dambeeyn ayey dawladdu doonaysa in la labanlaabo kuraasda waxbarashada xirfadeed ee dadka waaweeyn, waxa loo yaqaano yrkesutbilsning. Halkaas ayaa lugu maalgelinaya 1 bilyan oo koroon, ayey shirkan ka sheegtay Magdalena Andersson, wasiirada dhaqaalaha.